Microstation-Bentley - Page 3 - Geofumadas
Engineering na GIS ngwaọrụ nke enterprise Bentley
Migging a Geospatial platform over 10 afọ mgbe nke a gasịrị - Microstation Geographics - Oracle Spatial
Nke a bụ ihe ịma aka dị ọtụtụ maka ọtụtụ ọrụ Cadastral ma ọ bụ Cartography, nke dị na 2000-2010 Microstation Geographics dị ka igwe data gbasara mbara igwe, na-atụle ihe ndị dị ka ndị a: Njikwa Arch-node bụ ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị oke mkpa, maka ọrụ cadastral . DGN bu ihe ozo mara nma, n’atule ntughari ya n’otu faili, ...
cadastre, Apụta, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, qgis
BIM - usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha nke CAD
N'ọnọdụ anyị na Geo-Engineering, okwu BIM (Buildingme Ihe Nleba Ozi )lọ) abụghịzi ihe ọhụrụ, nke na-enye ohere ịme ihe dị iche iche dị adị n'ezie, ọ bụghị naanị na nnọchite anya ha kamakwa na usoro ndụ ha dị iche. . Ọ pụtara na a ụzọ, akwa, a valvụ, a kanaal, a ụlọ, ...
AutoDesk Bentley Systems DGN dwg M-nlereanya
AutoCAD-AutoDesk, Apụta, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, My egeomates
Akwụkwọ Akụkọ Bentley Latin America
Site na Onye isi oche nke Bentley maka Latin America, Alfredo Castejón na-agwa anyị na mbipụta mbụ na usoro nkwukọrịta a: Anyị na-ebido ọhụụ ọhụrụ na nkwukọrịta na ndị ọrụ anyị site na akwụkwọ akụkọ a n'otu oge n'akụkọ ihe mere eme nke Bentley anyị ga-echeta ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụ oge mgbe ...
Cadastral akwụkwọ ihe akpaghị aka CAD / GIS
Inye akwukwo ihe omuma na oge kachasi nma di nkpa maka inye ndi oru na mpaghara Cadastre, enwere ike mezi ya n'enweghi ike, na-achota oru oma na mbelata nke njehie mmadu. Na oge ochie, mgbe anyị na ndị ọchịchị na-arụ ọrụ, mgbe onye ọrụ rịọrọ nyocha na asambodo cadastral, ọkara ọrụ bụ ...
Bentley Systems cadastre M-nlereanya QGIS
Bentley Connection Omume
Nnukwu ngwaahịa nke Bentley Systems dị ugbu a, Microstation, ProjectWise na AssetWise ma site na ndị a, a na-agbasawanye onyinye a n'akụkụ dị iche iche nke Geo-Engineering. Dịka m gwara gị ihe dịka otu afọ gara aga, Bentley etinyela nzọ nke anọ na ihe ọ kpọrọ akpọ Connnect. N'etiti ọnwa May na ...
Akụziri CAD / GIS, innovations, Microstation-Bentley
GML emeghe a faịlụ na QGIS na Microstation
Faịlụ GML bụ otu n'ime usoro ndị mmepe na ndị ọrụ GIS nwere ekele nke ukwuu, ebe ọ bụ na ewezuga usoro nke OGC kwadoro ma kwado ya, ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu maka ịnyefe na mgbanwe data na ngwa weebụ. GML bụ ngwa. nke asụsụ XML maka ebumnuche geospatial, acronym ya bu ...
Chọọ na-eji dochie iji mgbe okwu: Microstation
Chọta na Dochie bụ ọrụ a na-ejikarị, m na-akọwa ya maka Excel. Mgbe ị na-etinye ya na nkewa ma ọ bụ CAD, ohere nke ịchọta ihe anyị na-achọ n'ụzọ doro anya dị mgbagwoju anya karị, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị ọchụchọ site na njirimara. Nsogbu a, dochie ederede m nwere eserese kariri 800 ...
Infrastructure Conference 2014: N'ike mmụọ nsọ maka Hispanics
N’izuụka gara aga ka emere Nzukọ Nnukwu akụrụngwa maka afọ 2014, ọzọ na London, bụ ebe a na-enwe onyinye ahụ nke akpọrọ Be Inspired. Ihe omume a haziri ahazi karịa oge ndị ọzọ, ngwa mkpanaka ha mepụtara maka iOS na gam akporo kacha mma; na mmelite, ...
Microstation-Bentley, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Nwee ike na 2014
Na Nọvemba 6, a ga-eme Awards kwa afọ Buru Mmụọ Nsọ na London. Datebọchị a ga - adaba na ogbako na teknụzụ metụtara njikwa nke ọgụgụ isi, nke ga - abụ Tuesday, Wednesday na Tọzdee. N'ebe a, anyị ndị bịara ogbako ahụ nwere ike isonye na nnọkọ 6 na-atọ ụtọ, na ọhụụ nke Ọdịnihu, ...
Otu esi mepee, kpọọ, ma kpoo faịlụ .shp na Microstation V8i
N'isiokwu a, anyị ga-ahụ otu esi emeghe, gosipụta ma kpọọ faịlụ shp site na iji Microstation V8i, otu ọrụ ahụ na Bentley Map. Ọ bụ ezie na ha bụ faịlụ 16-bit dịchapụrụ adịcha, ochie dịka ụfọdụ -ysy- nke m grays, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ha ga-anọgide na-eji ọnọdụ anyị. O doro anya na njirisi ndị a metụtara ihe eji egwu egwu ...
Ohere nke imekọrịta na Google Maps na Google Earth na ijizi data site na nyocha bụ ụfọdụ n'ime atụmanya ngwa ngwa nke usoro GIS - CAD ọ bụla. N’akụkụ ndị a, ọ nweghị onye na-enwe obi abụọ na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ agafeela ngwa ngwa karịa sọftụwia nwere ya. Ugbu a, m na-enyocha mmelite nke abụọ nke ...
Kpọọ ọrụ WMS site na Microstation
A maara ọrụ map weebụ dị ka vector ma ọ bụ Raster cartography deployments jere ozi na ịntanetị ma ọ bụ intranet site na iji ọkọlọtọ WMS nke TC211 Commission nke OGC kwalitere, Open Geospatial Consortium. Na mmechi, ihe ọrụ a na-eme bụ igosipụta otu ma ọ bụ karịa akwa dị ka onyonyo nwere akara na nghọta na ...
Microstation mekọrịta na Google Earth
Google Earth abụrụla ngwa ọrụ a na-apụghị izere ezere na usoro nkewa anyị ugbu a. Ọ bụ ezie na ọ nwere njedebe ya na nsonaazụ nke ịdị nfe ya, a na-ekwupụta ọtụtụ ihe rụrụ arụ kwa ụbọchị, anyị ji ngwá ọrụ a na geolocation na igodo na maapụ na-ewu ewu taa ... ya mere anyị nwere ...
Okwu 8.5 Microstation na Windows 7
Ndị nwere olile anya iji Microstation 8.5 taa ga-agarịrị Windows XP na igwe arụmọrụ maka enweghị nkwekọ na Windows 7, nke ka njọ na 64 ibe n'ibe. Ha na-ekwuputa nsogbu a na ederede ederede, nke m kwurula banyere tupu otu esi edozi ya, ha na-ezo aka na njikwa ihe oyiyi na njikọ ODBC. Ka anyị lee ka esi edozi ha ...
Brazil na nlegharị anya nke ogbako “Afọ Na-abaghị uru” na-abịanụ
Na 2004 Bentley Systems bidoro mmemme a na - eme kwa afọ nke akpọrọ Be Awards, nke mechara bido be Inspired. E wezụga mmemme mmesa dị mfe, n'afọ ndị na-adịbeghị anya anyị ahụla na Baltimore Symposium ghọrọ Nnọkọ Ọkwa dị elu ọ bụghị naanị na iji teknụzụ maka ịme ihe, imepụta ...
Obere ihu Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 15 Next page